Mormii Naqamteetti itti fufeen namni tokko du'ee 19 madaa'an - BBC News Afaan Oromoo
Mormii Naqamteetti itti fufeen namni tokko du'ee 19 madaa'an
Madda suuraa, Tolawaak
Dargaggoo Ababbaa Makonniin kan magaala Naqamteetti ajjeefame
Sanbata Darbe hooggantoota dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoof simannaan Magaalaa Naqamteetti qophaayee ture humnoota nageenyaan erga Dhorkamee booda Naqamteetti mormii guddaan ka'eera.
Mormii uummataa dhaabsisuuf ejjennoo humnoonni nageenyaa fudhataniin namni tokko ajjeefamee namoonni 19 ta'an madaawuu Meedikaal Daayireektarri Hospitaala Naqamtee Dr. Dassaaleny Taaddasaa himaniiru.
''Har'a ganama ciree wajjin nyaanna jenne walii bilbillee baane. yeroo baanu waraanni magaala Naqamtee keessatti banamee jira. Makalaakayaan dhukaasa banee mucaa durbaa tokko rukutee ture. Uummannis itti bahee jennaan ituu uummata ari'anii sana keessa mucaan kun dheeraadha qaama qaba ni mul'ata waan ta'eef cinaachasaa rukutanii achummatti du'e,'' jechuun Kiibxata galgala reeffa Abbabaa Makonnniin fuudhee gara Najjoo deemaa akka jiran Hiriyaansaa BBCtti himeera.
''Naqamteetti hojii mataa isaa uummatee hojjeta kan jedhu hiriyyaan Ababbaa ''cinaacha isaa fi mataasaa dhahani. battaluma rukutametti lubbuun darbe reeffa fuunee gara Hospitaalaa dhaqnes'' jedha.
''Hoospitaalattis warri Makalaakayaa karaa dhaabatanii isa du'es akka hin fuune isa madaayes akka hin waldhaansifne dhorkaa turan'' jechuun hiriyyaan Abbabaa himeera.
Meedikaal Daayireektarri Hospitaala Naqamtee Dr. Dassaaleny Taaddasaa ''Abbabaa Mokonnin dargaggeessi jedhamu lapheessaarra rukutamee lubbuun isaa darbe'' jedhanii, namoonni rasaasaan dhahaman Wiixata gara Hospitaalaa dhufuu akka eegalan himan.
''Wiixata nama jaha kanneen biroon ammoo Kibxata gara Hoospitaal dhufan. Walummatti 18/19 ni ta'u. Kana keessaa tokko lubbuun darbeera, tokko ammoo rifeerii gooneerra. Rasaasni hiddi dhiigaa fi narviisaa rukuteera kanaaf sarjarii akka dafee argatuuf ergine yoo ture miilli isaa cituu danda'a '' jedhan.
Madda suuraa, Lammii Beenyaa
Labsii yeroo muddamaa mootummaan Itoophiyaa labse sababeefachuun walgahiin kun seeraan ala jedhamuun magaalittii akka hin seenne dhorkamuu dura taa'aan KFO Dr. Mararaa Guddinaa BBC tti himaniiru.
''Walgahii hayyamame akka ta'e nutti himameeti kan nuti deemne. kanaaf ammoo poolisiin Wallaggaa Shawaatti dhufee nu simatee nuun dabaalee deemaa ture ragaadha'' jedhan.
''Ambootti Namoonnii miiliyoona lamatti siiqan bahanii osoo dhagaanillee hin darbatamiin nagaan akka xumurame, nutis qaama nagaa malee kan jeequmsaa akka hin taane uummannis ni beeka. Nuti madda jeequmsaa akka hin taane mootummaafis ifa dha'' jedhan Dr. Mararaan waayee ibsa Seekireeteriyaatiin Koomaand postii kaleessa kenne ilaalchisee yaada kennaniin.
'' Qabsoo seera qabeessadha qabsoon keenya. kanuma itti fufuu malee nuti gara hookkaraa fi daandii birootti hin deemnu. Hin barbaannu . Garasitti akka deemamus dhiibbaa uumaa hin jirru'' jedhan.
Gara fuula duraatti mootummaan yoo walgahiif hayyama kenne ykn uummanni hayyamsiifate uummata waliin waltajjii akka qopheessanis himaniiru.